စံရှမေောငျ (သို့မဟုတျ) လကျနကျခြ ရကပ ကြားတဈကောငျ (အပိုငျး-သုံး) – Kyaw Zaw Oo's Blog
May 9, 2013 March 15, 2019 kyaw zaw oo
တျောလှနျရေးကောငျစီဥက်ကဌ ဗိုလျခြုပျကွီးနဝေငျး နဲ့ ရကပ ဥက်ကဌ ရဲနီကြျောဇံရှီတို့ ငပလီက ဘနျဂလိုတဈခုမှာ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးပှဲ အစီအစဉျအရ ဆှေးနှေးနကွေတာကို သား (စာရေးသူ) မွငျဖူးတယျလို့ ပွောတယျနျော။ အဲသညျ ဓါတျပုံမှာ ရဲနီကြျောဇံရှီဘေးက ထိုငျနတေဲ့ အသကျအစိတျလောကျ လူငယျတဈယောကျကို မငျးတှမှေ့ာပေါ့။ သူက ကိုစံလှိုငျ ဆိုတာပေါ့။
ရကပ မှာ ရဲနီကြျောဇံရှီက ကိုယျတို့ထကျ အသကျကွီးပမေယျ့ ကိုယျ ရယျ၊ ကိုမောငျဟနျ ရယျ၊ ကိုရှသောရယျ၊ ကိုစံလှိုငျရယျ၊ ကိုရှမေိုးအောငျရယျ၊ ကိုသိနျးဖရေယျ . . . အစရှိတဲ့ သူ့လကျထောကျလို့ ဆိုရမယျ့ လူတှကေ ကိုယျနဲ့ ရှယျတူတနျးတူ မတိမျးမယိမျးတှေ။ ကိုစံလှိုငျကတော့ နညျးနညျးပိုကွီးမလားမသိဘူး။
ရခိုငျပွညျ ကှနျမွူနဈပါတီဟာ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲအတှကျ စဈတှကေတဈဆငျ့ ရနျကုနျနဲ့ ငပလီကို သှားရောကျဆှေးနှေးကွတာဖွဈပါတယျ။
ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲအတှကျ ကမျးလှမျးတယျဆိုတော့ . . . ကိုယျက ပါတီမှာ ပွောပွတယျ။ ဒီဆှေးနှေးပှဲအားဖွငျ့ ရလဒျကောငျးရမယျဆိုတာကို မမြှျောလငျ့နိုငျပမေယျ့၊ ဒီဆှေးနှေးပှဲအားဖွငျ့ ကိုယျတို့ရဲ့ မူဝါဒ က ဘာလဲ ဆိုတာကို ပွညျသူလူထုမွငျအောငျ ခပြွသှားနိုငျလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ ဒီဆှေးနှေးပှဲကို ဝငျသငျ့တယျ . . . အစရှိသညျအားဖွငျ့ ကိုယျက တငျပွတယျ။ ကနျြတဲ့ ဗဟိုကျောမတီဝငျတှကေလညျး ဒီသဘောထားအတိုငျးပဲ ရှိကွတော့ ရကပဟာ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲကို တကျဖွဈသှားတယျ။
အဲသညျအခြိနျမှာ ကိုယျတို့အဖိုးကွီး ရဲနီကြျောဇံရှီဟာ ဗကပတှေ ၀ိုငျးတိုကျတာကို ခံရလို့ ကြောကျတျောမွို့နယျထဲမှာ လူလကျနကျ (၇၀) လောကျနဲ့ ခြာခြာလညျနတေဲ့အခြိနျပေါ့။ အခွားသော ရကပ ဗဟိုကျောမတီဝငျတှေ ဆှေးနှေးပှဲအတှကျ စဈတှကေို တဖှဲဖှဲရောကျလာကွခြိနျမှာ ယူဂြီဖွဈနတေဲ့ ကိုယျလညျး စဈတှကေို ရောကျလာတယျ။ ကိုယျတို့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျကွီး ကြျောဇံရှီ ကိုယျ၌က ဘာဆှေးနှေးရမှနျးကို သိသေးတာ မဟုတျဘူး။ “ငါ အစာ ပွောရဖို့လေး . . . ဝေး” လို့ပဲ မေးတယျ။ ဒါနဲ့ ဟိုစဉျက အလငျးဝငျပွီး ဒီမိုကရစေီသဈပါတီ ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ မွပေျေါပါတီထောငျလှုပျရှားနတေဲ့ ဘုံဘောကျသာကြျောဆီ ကိုယျသှားတှေ့ ဆှေးနှေးတယျ။
“ဆိုဗီယကျပုံစံ ပွညျထောငျစုစနဈကို မငျးသိသားပဲ။ အဲဒီပုံစံအတိုငျးပဲ ပေါ့ကှာ။ တို့လိုခငျြတာကတော့ ရခိုငျပွညျသူ့သမ်မတ နိုငျငံပေါ့ကှာ။ ဒါပမေဲ့ ပွညျထောငျစု သမ်မတ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အဖှဲ့ဝငျ သမ်မတ နိုငျငံပေါ့။” လို့ ဘုံဘောကျသာကြျောက လမျးကွောငျးခပြေးတယျ။
ဘုံဘောကျသာကြျော ပွောတာကို ကိုယျသဘောကတြယျ။ ကိုယျ့မိတျဆှတှေနေဲ့ပွနျညှိတော့၊ သူတို့လညျး သဘောတူတယျ။ ဒါနဲ့ ကိုယျတို့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျ ရဲနီကြျောဇံရှီကို ဆှေးနှေးပှဲမှာ ဒီမူအတိုငျးပဲ ရပျတညျသှားဖို့ ၀ိုငျးဝနျးတငျပွကွတယျ။ သူကလညျး ကွိုကျတယျ။
ဒါနဲ့ ရဲနီကြျောဇံရှီခေါငျးဆောငျတဲ့ ရခိုငျပွညျကှနျမွူတဈပါတီရဲ့ တောငျးဆိုခကျြဟာ ရခိုငျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ တညျထောငျရေးဖွဈတယျ ဆိုတာ ကယျြကယျြလောငျလောငျ အသံထှကျလာတော့ စဈတှဘေကျက လကျဝဲယိမျးတဲ့ ရခိုငျအမြိုးသားရေးလူငယျတှရေဲ့ ထောကျခံမှုကို ရလာတယျ။ စဈတှကေ သတ်တိကောငျးကောငျး ခတျေပညာတတျ ကိုစောမောငျတို့အုပျစု ကိုယျတို့နဲ့တကျသှယျပွီးတော့ ရကပ ဆီမှာ တောခိုတယျ။ ကိုစောမောငျ၊ ကိုဗသိနျး၊ ကိုကြျောဇံ၊ ကိုအောငျစိနျသာ နဲ့ ကိုရှမေငျးတို့ ငါးယောကျပေါ့။ (ကိုစောမောငျက စာရေးဆရာ၊ ကဗြာဆရာ၊ ဂြာနယျလဈတဈပိုငျး ရှနေ့တေဈပိုငျး ကြူရှငျဆရာတဈပိုငျး။ “ကွောငျလိမျလှကေား ကဗြာမြား” စာအုပျနဲ့ စာပဗေိမာနျ စာမူဆု ရဖူးတယျ။ ကိုဗသိနျးက သမိုငျးဆောငျးပါးတှေ ရေးနတေဲ့ စာရေးဆရာ ကြောငျးဆရာ။)
သူတို့က ခတျေပညာတတျတှဆေိုတော့ အဖိုးကွီး ရဲနီကြျောဇံရှီ မမွငျနိုငျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို မွငျတတျကွတယျ။ ကိုစောမောငျဆိုရငျ နိုငျငံရေးသိပ်ပံကို ထဲထဲဝငျဝငျ လလေ့ာဖူးတဲ့သူ။
ဒီတော့ ခတျေပညာမတတျ လှကွေီးထိုးရိုးရိုး ပွောကျကြားခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ မွို့ပျေါ ခတျေပညာတတျ လကျဝဲလူငယျတှေ အကွားမှာ တဈဘကျနဲ့ တဈဘကျ စိတျပကျြစရာတှေ ဖွဈပကျြလာကွတော့တယျ။
ဆိုပါတော့ . . . ဘာမှမဟုတျတဲ့ အစားအသောကျကိစ်စကအစ စကားပွောမိရာကနေ ငွိုငွငျစရာဖွဈလာတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ တပျသားတှကေို အဟာရပွညျ့ဝတဲ့ အစားအသောကျတှေ ကြှေးသငျ့တယျလို့ ကိုစောမောငျက သှားအကွံပွုမိတာမြိုး၊ ပရိုတိနျးပမာဏ ဘယျလောကျပါသငျ့တယျ ဆိုတာမြိုးတှေ လာပွောတာမြိုးကတြော့ ရဲနီကြျောဇံရှီ အတှကျ အမွငျကတျစရာ ဖွဈလာတယျ။ “ဝေး . . . ၊ စောမောငျ၊ ပရိုတိနျးဆိုစာ အစာလေးဝေး။ ငရို့ ကတော့ခါ တောထေးမာ ရစှာစားပွီး အသကျရှငျနီကတျစှာ” လို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပွနျပွောတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ကွာလာတော့ ဒီမှာ ဆကျနဖေို့ မဖွဈနိုငျတော့ဘူးဆိုတာကို ကိုစောမောငျတို့အုပျစု ကလညျး မွငျလာတယျ။ သူတို့ရောကျပွီး သုံးလကြျော လေးလလောကျအကွာမှာပဲ ထှကျစာတငျကွတော့တယျ။ ကိုယျတို့ဆီမှာကတော့ ပါတီကထှကျဖို့ကွိုးစားရငျ သတျပဈတယျ ဆိုတာမြိုးမှ မရှိပဲ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ကို ပွနျလှတျလိုကျရတဲ့အတှကျ ပါတီအနနေဲ့ တျောတျော ကရိကထမြားသှားရပွီးပေါ့။ စခနျးတှေ ဘာတှေ ပွောငျးရတယျ။ တခွားစီစဉျစရာရှိတာတှကေို စီစဉျရတယျ။ ကိုရှမေငျးက ကာဘိုငျအစုတျတဈလကျယူသှားပွီး၊ မရမက ဇှတျပွနျသှားတယျ။ ကိုဗသိနျး၊ ကိုအောငျစိနျသာနဲ့ ကိုကြျောဇံတို့က သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ အသာလေးလဈပွီး မွို့ပျေါပွနျရောကျသှားတယျ။ ကိုစောမောငျက ထှကျစာတငျတယျ ဆိုတော့ သူ့ကို ပါတီက ခဏထိနျးသိမျးထားသေးတယျ။ အားလုံး အဆငျသငျ့ဖွဈတဲ့အခါ သူ့ကို လှတျပေးလိုကျတယျ။ သူတို့ပွနျရောကျသှားတဲ့အခါ မွို့နယျအဆငျ့ ပါတီကောငျစီတှဆေီမှာ တရားဝငျ အလငျးဝငျတယျနဲ့ တူပါတယျ။
အဲသလိုနဲ့ ကိုစောမောငျတို့ ခတျေပညာတတျအုပျစု ပါတီကို စှနျ့ခှာပွီး မွို့တှငျးကို ပွနျရောကျသှားတယျ။ သူတို့ဒီလို စှနျ့ခှာသှားတာဟာ ကိုယျတို့ရဲ့ မွို့ပျေါ စညျးရုံးရေးကို တျောတျော အထိနာသှားစခေဲ့တယျ။
စံရွှေမောင် (သို့မဟုတ်) လက်နက်ချ ရကပ ကျားတစ်ကောင် (အပိုင်း-သုံး)
တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း နဲ့ ရကပ ဥက္ကဌ ရဲနီကျော်ဇံရွှီတို့ ငပလီက ဘန်ဂလိုတစ်ခုမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်အရ ဆွေးနွေးနေကြတာကို သား (စာရေးသူ) မြင်ဖူးတယ်လို့ ပြောတယ်နော်။ အဲသည် ဓါတ်ပုံမှာ ရဲနီကျော်ဇံရွှီဘေးက ထိုင်နေတဲ့ အသက်အစိတ်လောက် လူငယ်တစ်ယောက်ကို မင်းတွေ့မှာပေါ့။ သူက ကိုစံလှိုင် ဆိုတာပေါ့။
ရကပ မှာ ရဲနီကျော်ဇံရွှီက ကိုယ်တို့ထက် အသက်ကြီးပေမယ့် ကိုယ် ရယ်၊ ကိုမောင်ဟန် ရယ်၊ ကိုရွှေသာရယ်၊ ကိုစံလှိုင်ရယ်၊ ကိုရွှေမိုးအောင်ရယ်၊ ကိုသိန်းဖေရယ် . . . အစရှိတဲ့ သူ့လက်ထောက်လို့ ဆိုရမယ့် လူတွေက ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူတန်းတူ မတိမ်းမယိမ်းတွေ။ ကိုစံလှိုင်ကတော့ နည်းနည်းပိုကြီးမလားမသိဘူး။
ရခိုင်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် စစ်တွေကတစ်ဆင့် ရန်ကုန်နဲ့ ငပလီကို သွားရောက်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် ကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတော့ . . . ကိုယ်က ပါတီမှာ ပြောပြတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲအားဖြင့် ရလဒ်ကောင်းရမယ်ဆိုတာကို မမျှော်လင့်နိုင်ပေမယ့်၊ ဒီဆွေးနွေးပွဲအားဖြင့် ကိုယ်တို့ရဲ့ မူဝါဒ က ဘာလဲ ဆိုတာကို ပြည်သူလူထုမြင်အောင် ချပြသွားနိုင်လိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ၀င်သင့်တယ် . . . အစရှိသည်အားဖြင့် ကိုယ်က တင်ပြတယ်။ ကျန်တဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကလည်း ဒီသဘောထားအတိုင်းပဲ ရှိကြတော့ ရကပဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ဖြစ်သွားတယ်။
အဲသည်အချိန်မှာ ကိုယ်တို့အဖိုးကြီး ရဲနီကျော်ဇံရွှီဟာ ဗကပတွေ ၀ိုင်းတိုက်တာကို ခံရလို့ ကျောက်တော်မြို့နယ်ထဲမှာ လူလက်နက် (၇၀) လောက်နဲ့ ချာချာလည်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။ အခြားသော ရကပ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေ ဆွေးနွေးပွဲအတွက် စစ်တွေကို တဖွဲဖွဲရောက်လာကြချိန်မှာ ယူဂျီဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်လည်း စစ်တွေကို ရောက်လာတယ်။ ကိုယ်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကျော်ဇံရွှီ ကိုယ်၌က ဘာဆွေးနွေးရမှန်းကို သိသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ “ငါ အစာ ပြောရဖို့လေး . . . ဝေး” လို့ပဲ မေးတယ်။ ဒါနဲ့ ဟိုစဉ်က အလင်းဝင်ပြီး ဒီမိုကရေစီသစ်ပါတီ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ မြေပေါ်ပါတီထောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဘုံဘောက်သာကျော်ဆီ ကိုယ်သွားတွေ့ ဆွေးနွေးတယ်။
“ဆိုဗီယက်ပုံစံ ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို မင်းသိသားပဲ။ အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲ ပေါ့ကွာ။ တို့လိုချင်တာကတော့ ရခိုင်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံပေါ့ကွာ။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဖွဲ့ဝင် သမ္မတ နိုင်ငံပေါ့။” လို့ ဘုံဘောက်သာကျော်က လမ်းကြောင်းချပေးတယ်။
ဘုံဘောက်သာကျော် ပြောတာကို ကိုယ်သဘောကျတယ်။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်ညှိတော့၊ သူတို့လည်း သဘောတူတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ရဲနီကျော်ဇံရွှီကို ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒီမူအတိုင်းပဲ ရပ်တည်သွားဖို့ ၀ိုင်းဝန်းတင်ပြကြတယ်။ သူကလည်း ကြိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ ရဲနီကျော်ဇံရွှီခေါင်းဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူတစ်ပါတီရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဟာ ရခိုင်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ရေးဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အသံထွက်လာတော့ စစ်တွေဘက်က လက်ဝဲယိမ်းတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားရေးလူငယ်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရလာတယ်။ စစ်တွေက သတ္တိကောင်းကောင်း ခေတ်ပညာတတ် ကိုစောမောင်တို့အုပ်စု ကိုယ်တို့နဲ့တက်သွယ်ပြီးတော့ ရကပ ဆီမှာ တောခိုတယ်။ ကိုစောမောင်၊ ကိုဗသိန်း၊ ကိုကျော်ဇံ၊ ကိုအောင်စိန်သာ နဲ့ ကိုရွှေမင်းတို့ ငါးယောက်ပေါ့။ (ကိုစောမောင်က စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဂျာနယ်လစ်တစ်ပိုင်း ရှေ့နေတစ်ပိုင်း ကျူရှင်ဆရာတစ်ပိုင်း။ “ကြောင်လိမ်လှေကား ကဗျာများ” စာအုပ်နဲ့ စာပေဗိမာန် စာမူဆု ရဖူးတယ်။ ကိုဗသိန်းက သမိုင်းဆောင်းပါးတွေ ရေးနေတဲ့ စာရေးဆရာ ကျောင်းဆရာ။)
သူတို့က ခေတ်ပညာတတ်တွေဆိုတော့ အဖိုးကြီး ရဲနီကျော်ဇံရွှီ မမြင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မြင်တတ်ကြတယ်။ ကိုစောမောင်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာဖူးတဲ့သူ။
ဒီတော့ ခေတ်ပညာမတတ် လှေကြီးထိုးရိုးရိုး ပြောက်ကျားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မြို့ပေါ် ခေတ်ပညာတတ် လက်ဝဲလူငယ်တွေ အကြားမှာ တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက် စိတ်ပျက်စရာတွေ ဖြစ်ပျက်လာကြတော့တယ်။
ဆိုပါတော့ . . . ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အစားအသောက်ကိစ္စကအစ စကားပြောမိရာကနေ ငြိုငြင်စရာဖြစ်လာတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တပ်သားတွေကို အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေ ကျွေးသင့်တယ်လို့ ကိုစောမောင်က သွားအကြံပြုမိတာမျိုး၊ ပရိုတိန်းပမာဏ ဘယ်လောက်ပါသင့်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေ လာပြောတာမျိုးကျတော့ ရဲနီကျော်ဇံရွှီ အတွက် အမြင်ကတ်စရာ ဖြစ်လာတယ်။ “ဝေး . . . ၊ စောမောင်၊ ပရိုတိန်းဆိုစာ အစာလေးဝေး။ ငရို့ ကတော့ခါ တောထေးမာ ရစွာစားပြီး အသက်ရှင်နီကတ်စွာ” လို့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြန်ပြောတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတော့ ဒီမှာ ဆက်နေဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို ကိုစောမောင်တို့အုပ်စု ကလည်း မြင်လာတယ်။ သူတို့ရောက်ပြီး သုံးလကျော် လေးလလောက်အကြာမှာပဲ ထွက်စာတင်ကြတော့တယ်။ ကိုယ်တို့ဆီမှာကတော့ ပါတီကထွက်ဖို့ကြိုးစားရင် သတ်ပစ်တယ် ဆိုတာမျိုးမှ မရှိပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို ပြန်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ပါတီအနေနဲ့ တော်တော် ကရိကထများသွားရပြီးပေါ့။ စခန်းတွေ ဘာတွေ ပြောင်းရတယ်။ တခြားစီစဉ်စရာရှိတာတွေကို စီစဉ်ရတယ်။ ကိုရွှေမင်းက ကာဘိုင်အစုတ်တစ်လက်ယူသွားပြီး၊ မရမက ဇွတ်ပြန်သွားတယ်။ ကိုဗသိန်း၊ ကိုအောင်စိန်သာနဲ့ ကိုကျော်ဇံတို့က သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ အသာလေးလစ်ပြီး မြို့ပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်။ ကိုစောမောင်က ထွက်စာတင်တယ် ဆိုတော့ သူ့ကို ပါတီက ခဏထိန်းသိမ်းထားသေးတယ်။ အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါ မြို့နယ်အဆင့် ပါတီကောင်စီတွေဆီမှာ တရားဝင် အလင်းဝင်တယ်နဲ့ တူပါတယ်။
အဲသလိုနဲ့ ကိုစောမောင်တို့ ခေတ်ပညာတတ်အုပ်စု ပါတီကို စွန့်ခွာပြီး မြို့တွင်းကို ပြန်ရောက်သွားတယ်။ သူတို့ဒီလို စွန့်ခွာသွားတာဟာ ကိုယ်တို့ရဲ့ မြို့ပေါ် စည်းရုံးရေးကို တော်တော် အထိနာသွားစေခဲ့တယ်။
Arakan Communist Party
U San Maung Than
Previous စံရှမေောငျ ၊သို့မဟုတျ၊ လကျနကျခြ ရကပ ကြားတဈကောငျ (အပိုငျး နှဈ)
Next စံရှမေောငျ (သို့မဟုတျ) လကျနကျခြ ရကပ ကြားတဈကောငျ (အပိုငျး-ငါး)